नौ महिनाको बच्चा एउटा कोठामा सुताएर पति पत्नी अर्को कोठामा आत्मा’ हत्’या गरे । – Online Nepal
नौ महिनाको बच्चा एउटा कोठामा सुताएर पति पत्नी अर्को कोठामा आत्मा’ हत्’या गरे ।
June 28, 2020 198
गाजियाबादको साहिबाबादस्थित इंदिरापुरमको ज्ञान ब्लाक १ मा शुक्रबार बिहान पति र पत्नीको श’व आर्को कोठामा झुण्डिएका थिए। मृ’तक महिलाले ग्रेटर नोएडामा बस्ने मोबाइलको बहिनीलाई मेसेज गरीएको थियो।
निखिल आफ्नी पत्नी पल्लवी र ९ महिनाको बच्चाको साथ दोस्रो इण्डिरामा इंदिरापुरमको ज्ञान खण्ड १ मा in२8 नम्बरको प्लाट नम्बरमा बस्दै थिए। निखिल नोएडाको एक निजी कम्पनीमा बिक्री विभागमा काम गर्थे। ग्रेटर नोएडामा बस्ने उनकी दिदी अंजलीलाई शुक्रबार बिहान पल्लवीको मोबाइलबाट सन्देश आएको थियो। सन्देशमा यो लेखिएको थियो कि बाबु घरमा एक्लै छन् र 6:०० सम्ममा घर पुग्नु पर्छ।
गाजियाबादमा बसिरहेकी अञ्जलीले उनका साथीला’ई घरमा पुग्न भने र घ’टना थाहा भयो। पुलिस सूचनामा पुगे र दुबैको श’व पोष्टमार्टमका लागि पठाए। फरेन्सिक टोलीले घटनास्थलबाट साक्ष्य भेला गरेको छ। पल्लवीले एक बर्ष पहिले जागिर छोडिदिए र उनका पति नोएडाको एक निजी फर्ममा काम गरे।
सीओ इंदिरापुरम अंशु जैनले जानकारीमा प्रहरी टोली घ’टनास्थल पुगेको बताएको छ, महिलाको शव झु’ण्डिएको अ’वस्थामा भेटिएको थियो, अर्को कोठामा जाँदा उक्त व्य’क्तिको लास फन्दामा झुण्डिएको थियो र घटनास्थलमा केही रगतका निशान पनि भेटिएका थिए। लास पोष्टमार्टमको लागि पठाइएको छ र घ’टनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ,प्रहरीले घटनास्थलबाट कुनै सु’साइड नोट पाएको छैन। परि’वारले बच्चालाई आफूसँगै लगेका छन्।
Prevह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य बनायो नयाँ रेकर्ड , हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो ?
Nextनायिका पूजा शर्माले नेपालमा ७२ प्रदेश र १४ जिल्ला छन् भनेपछि भिडियो भाइरल
यस्तो छ आज दशैँ टिकाको शुभ साइत !
३ वर्षीय बालक सहित बेवारिसे अवस्थामा मृत भेटिएका व्यक्तिमा पनि कोरोना पुष्टि
राती सुत्नु अघी यस्ता कार्य गर्नुभएको छैन भने आजै बाट सुरु गर्नुहोस,नसोचेको फाइदा मिल्छ
सोनिका रोकायले पारससँगको नाताबारे खोलिन् रहस्य, भनिन्, ‘मलाई रानी हुने रुचि छैन’